Guddiga doorashooyinka oo Baarlamaanka usoo bandhigay (Laba nooc Doorasho) – Kalfadhi
Guddoomiyaha Guddiga Madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaran Xaliima Ismaaciil Ibraahim (Xaliima Yarey) ayaa maanta oo sabti ah xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ka hor-jeedisay warbixinta doorashada 2020/21, warbixintaasi oo aad loo wada sugayay.
Guddoomiye Xaliima Yarey ayaa xildhibaannada iyo shacabka Soomaaliyeed u caddeysay in doorashada ku dheceysa habka biometric ka ah aysan suurto gal ahayn inay ku qabsoonto wakhtiga loogu talagalay ee ahaa Nov 27 sannadkan 2020. Noocaasi biometric ah ayey sheegtay in ay ku qabsoomi karto muddo 13 bilood ah oo ka bilaabmaysa July 2020 kuna eg Aug 2021. Nooca doorasho ee biometric waxaa loola jeedaa in tirakoobka codbixiyaasha la ogyahay ka hor doorashada.
Guddoomiyaha Guddiga Madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaran, ayaa soo bandhigtay nooc labaad oo doorasho ah oo lagu magacaabo diiwaangellinta gacanta ee isla maalinta codbixinta (Same day manual registration). Noocaan ayaa ah in codbixiyaha la diiwaan-gelliyo maalinta uu codkiisa dhiibanayo.
Noocan ayuu Guddigu sheegay in uu ku qabsoomi karo muddo 9-aal bilood ah oo ka bilaabmeysa July 2020 kuna eg march 2021. Habkan waxaa uu ka qarash yar-yahay kana wakhti gaaban-yahay nooca diiwaan-gellinta ee ku xusan sharciga doorashooyinka Qaranka.
Xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa laga sugayaa in ay doodo dheer kaddib ay u codeeyaan mid kamid ah labada nooc-doorasho ee Guddoomiyaha Guddiga Madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaran ay ka hor-sheegtay Baarlamaanka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa furitaankii Kalfadhiga 7-aad ka sheegay in dalka Soomaaliya ay ka dhici doonto Doorasho Qof iyo Cod ah taas oo awooda dib ugu celineysa shacabka Soomaaliyeed.
Golaha Shacabka oo ansixiyay in Gobolka Banaadir uu 13 kursi ku yeesho Aqalka Sare